KOOXAHA ISKU DARKA Soo-saareyaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Shirkadda Kubadda Cagta ee Shiinaha
Iskuxidhka Kubadda Isku-xiraha Joojinta Warshad-Z12050
MAXAY MUHIIMADA ISKU DUUBAN YAHAY? Inta badan sida kala-goysyada misigta aadanaha, kala-goysyada kubbaduhu waxay u dhaqmaan sidii qodobbo muhiim ah. Waxay yihiin qayb muhiim ah oo isku xirta xiriirada kaladuwan ee udhaxeeya ganaaxaaga iyo qashinkaaga. Marka giraangiraha gaarigaagu kor iyo hoos u dhaqaajiyo tiirarka ka joojinta iyadoo loo marayo kala-goysyada kubbadda. Waxay u oggolaadaan joojinta inay si madax-bannaan u dhaqaaqdo iyadoon faragelin ficilka giraangirta. Dhaqdhaqaaqan madaxbannaan wuxuu ka soocayaa dhaqdhaqaaqa gawaarida gawaarida, isagoo abuuraya hanaan deggan oo deggan. Waxaa jira afar ...
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Ball Joint-Z12051
Maxay iskudhafka kubbadu sameeyaan? Kala-goysyada kubbadu waa qayb ka mid ah ganaaxa hore ee gaariga. Joojinta hore waa iskuxir adag oo iskuxir ah, kala-goysyo, duubitaanno iyo xargaha oo u oggolaanaya giraangirahaaga hore inay kor iyo hoos u madaxbanaanaadaan oo ay bidix ama midig u wada jeestaan. Inta lagu gudajiro dhaqdhaqaaqa hakinta waxay kordhisaa xiriirka taayirada wadada si loo xakameeyo gawaarida ugu fiican iyo duugista taayirka. Kala-goysyada kubbadu waa qaybta ugu muhiimsan ee ganaaxa hore ee isku xira xiriiro kala duwan iyo ...
Xakamaynta Tayada Gawaarida Gawaarida Gawaarida Xakamaynta Tayada Gawaarida Qaybta Wadajirka-Z12056
Ma u Baahan Tahay Wadajirka Kubadaha Cusub? Kala-goysyada kubbadu waxay door muhiim ah ku leeyihiin hawlgalka nabadgelyada ee isteerinka gawaarida iyo hakinta. Waxay ku xirmaan istiraatiijiyada isteerinka gacmaha koontaroolka. Isku-xidhka kubbadu waa kubbadda iyo godka jilicsan ee u oggolaanaya hakinku inuu dhaqaaqo isla markaana isla markaa u oggolaanaya giraangiraha inay socdaan. Sababtoo ah wadajirka kubbadda ayaa u dhaqaaqi kara laba jiho oo kala duwan hal mar, ganaaxa ayaa sidoo kale. Gawaarida waxaa laga yaabaa inay yeeshaan iskudhafyo isku dhaf ah oo kubado kala duwan leh iyadoo kuxiran gaar ahaan ganaaxa ...
Tayada Sare Auto Qaybo Ball Wadajirka NISSAN-Z12058
Hakinta Hore ee Kubadda Wadajirka NISSAN-Z12059
Ball Tayada Sare Wadajirka Auto dayactir Oem- Z12061
Jidhkeenu wuxuu ka kooban yahay kala-goysyo badan. Kala-goysyadu waxay naga caawinayaan inaan u dhaqaaqno si firfircoon oo dabacsan, dhaqdhaqaaqani wuxuu yareeyaa saameynta. Isku-xidhka kubbadda ayaa la mid ah isku-xidhka ka joojinta gaadhiga. Ku xir inta u dhexeysa gacanta koontaroolka iyo garabka. Maxaa kubbada loo qabtay? Si loo xakameeyo gaariga, waxaa loo baahan yahay in giraangiraha hore loo rogi karo jihada la doonayo. Farsamaynta isteerinka waxaa loo isticmaalaa in si sax ah loo wareejiyo giraangiraha, iyo kubbadda qaadista waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro kaameradda wareega ee kabaalka. Isticmaalka kubbadda ku biiro ...
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Sare ee OPEL -Z12063
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Ball Joint-Z12065
Nooca Ingiriisiga ah Axle Hakinta Hore Bidix Midig Kubad Wadaag-Z12066
Ball Joojinta Jumlada Jumlada-Z12052
Naxdinta Rubber Rubber, Jabinta Steering Front, Hood Shooga Nuugista, Gawaarida Hub, Wadajirka Kubadda Tire, Naxdinta Nuugista Bolt,